Voters' Roll Concerns Ahead of Zimbabwe Poll - allAfrica.com
Voters' Roll Concerns Ahead of Zimbabwe Poll
The failure of the Zimbabwe Elections Commission to provide all political parties with the voters' roll as required by the Electoral Act has raised concerns about the body's competence and impartiality.
VIDEO: Contentious Zimbabwe Elections Draw Millions of Voters
Zimbabwe: Electoral Body Fails to Release Voters' Roll
There is still no sign of the voters roll from the Electoral Commission, just two days before Zimbabweans go to the polls Wednesday. Read more »
VOA, 30 July 2013
The Movement for Democratic Change (MDC) formation of Prime Minister Morgan Tsvangirai on Tuesday claimed that the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has been relegated to mere… Read more »
Zimbabwe: Voters' Roll - ZEC in Breach of Electoral Act
WE now have one day to go until the election. I have just this morning, July 29, 2013, spoken to our Elections Director in Harare and she advises that despite repeated requests we… Read more »
Zimbabwe: Tsvangirai Calls On ZEC to Resign
PRIME Minister Morgan Tsvangirai said Monday he doesn't trust the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to conduct free and fair elections on Wednesday and called for the… Read more »
Zimbabwe: We're 99 Precent Ready for Polls - Makarau
ZIMBABWE Electoral Commission (ZEC) chairperson, Justice Rita Makarau said Monday that her organisation was ready to hold credible elections on Wednesday. Read more »
South Africa: Zuma Optimistic About Zim Elections
President Jacob Zuma called on Zimbabwe on Monday to stage peaceful elections this week. Read more »
Zimbabwe: Mudede Now Holds Key to Elections
Financial Gazette, 25 July 2013
AT the time of this publication, Zimbabwe will be six days away from what looks like a destiny-defining election. Read more »
Zimbabwe: Political Parties Still Don't Have the Voters Roll
SW Radio, 24 July 2013
With just one week to go before the general elections, political parties have still not been given the national consolidated voters roll. Read more »
Zimbabwe: Registered Voters Reach 6,4 Million
The Herald, 22 July 2013
ZIMBABWE'S total registered voters is now over 6, 4 million after 747 928 new voters were registered under the just ended national mobile registration that ran between June 10,… Read more »
Zimbabwe: What Does ZEC Have to Hide?
AS the general elections draw closer, it is increasingly becoming clear Zimbabwe is not ready for the polls despite what Zanu PF officials and their state media hacks would have us… Read more »
Kubatana.net, 12 July 2013
The Zimbabwe Election Support Network (ZESN) has noted serious irregularities in the Voters' Roll purchased by the organisation from the Office of Registrar General on 19 June,… Read more »